Search အော်ကာမျာ - BajarFB.com
Search Results - အော်ကာမျာ
ကြယ်ပေါင်းထောင်သောင်း အာကာမှာ ကြယ်ပေါင်း ခုကြယ်ထက် ညဦးကြယ် တောက်တေ ကောင်းကောင်း မိုးရိပ်ချုပ်ကေ တောက်တေ ကြယ်လည်း ပျောက်လားယေ ချစ်တေလူလဲ အမောင်ကိုထားလို့ လားခေရ ယင်းသူဇာမှာလဲ ယင်းသူဇာမာဟိလီလဲ ?????????????? နားလည်ကတ်လားးး ?
ကြယ်ပေါင်းထောင်သောင်း အာကာမှာ ကြယ်ပေါင်း ခုကြယ်ထက် ညဦးကြယ် တောက်တေ ကောင်းကောင်း မိုးရိပ်ချုပ်ကေ တောက်တေ ကြယ်လည်း ပျောက်လားယေ ချစ်တေလူလဲ အမောင်ကိုထားလို့ လားခေရ ယင်းသူဇာမှာလဲ ယင်းသူဇာမာဟိလီလဲ ?????????????? နားလည်ကတ်လားးး ? Thant Zaw Hein 14 Dec 2020 · 847 views
🌠 ကွယျပေါငျးထောငျသောငျ 🌠 🌠 အာကာမှာ ကွယျပေါငျး 🌠
🌠 ကွယျပေါငျးထောငျသောငျ 🌠 🌠 အာကာမှာ ကွယျပေါငျး 🌠 Ko Nyi 17 Sep · 350 views
အာကာမာ ငှရေောငျထှနျးရို့ ဟိရေ ကို့ခဈြသူ မိုးရိပျကွကျရို့ ပြောကျလားခရေ ကို့ကိုယျ ခဈြလီသူ....💛💙💜
အာကာမာ ငှရေောငျထှနျးရို့ ဟိရေ ကို့ခဈြသူ မိုးရိပျကွကျရို့ ပြောကျလားခရေ ကို့ကိုယျ ခဈြလီသူ....💛💙💜 Saimong Marma4Oct 2019 · 320 views
ရီပွငျမှာ...လိူငျး...🌊 တောငျနံရံဝိုငျး...⛰ အာကာမှာ မိုးညိုမိူငျးး🌫
ရီပွငျမှာ...လိူငျး...🌊 တောငျနံရံဝိုငျး...⛰ အာကာမှာ မိုးညိုမိူငျးး🌫 Win Min Zaw 11 Oct
အာကာမှာ ငွေရောင်ဖြန်းရို့ ဟိလီဖို့လားယေ မိုးရိပ်တက်ရို့ ပျောက်လခရေ ကိုယ်ကိုသျှစ်လီ အနောက်ပြည်က ရခိုင်သခြင်းချေပါယေ
အာကာမှာ ငွေရောင်ဖြန်းရို့ ဟိလီဖို့လားယေ မိုးရိပ်တက်ရို့ ပျောက်လခရေ ကိုယ်ကိုသျှစ်လီ အနောက်ပြည်က ရခိုင်သခြင်းချေပါယေ Khingmoe Naing7Mar 2014